Puntland oo si rasmi ah u furtay nidaamka xisbiyada badan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo si rasmi ah u furtay nidaamka xisbiyada badan
March 25, 2017 Mohammed Omer Ahmed Mulla Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali oo ka hadlaya munaasabada furitaanka. [Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah u furtay nidaamka xisbiyada badan.
Munaasabada daahfurka ayaa ka dhacday xarunta PDRC ee kutaala caasimada Puntland ee Garoowe, waxaana ka qaybgalay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo masuuliyiin kale oo katirsan dowladda.
Isaga oo ka hadlayay munaasabada, Madaxweynaha ayaa sheegay in nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiyadu uu yahay mid faa’iido weyn u leh dhammaan shacabka, kaasoo siinaya qof walba oo muwaadin reer Puntland ah in uu si xor ah u doorto cida uu rabo.
Cabdiweli ayaa ku booriyay dadka shacabka ah in ay ka qaybqaataan hanaanka dimuqraadiyada, oo uu sheegay in lagaga gudbi doono nidaamka ku salaysan awood qaybsiga qabiilka ee hadda ka jira Puntland.
Xukuumadii Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa sanadkii 2013-kii isku dayday in ay Puntland ka hirgaliso nimadkan balse waxa uu ku dhammaaday fashil kadib caqabado badan oo kaga yimid dad kasoo horjeestay qaabka ay dowladdu ku waday hanaankaas.